TRANGANA KOLIKOLY : Nangingina ny raharaha Razaimamonjy Claudine
Tsy nisy tohiny intsony. Fito volana taty aorian’ny nisamborana an’ilay mpandraharaha Malagasy sady mpanolo-tsaina manokan’ny Filoham-pirenena, Ramatoa Razaimamonjy Claudine dia tsy nandrenesa tohiny intsony ny raharaha. 10 novembre 2017
Tsy fantatra intsony hatreto izay niafaran’ity voantonona ho tompon’antoka feno tamin’ny trangana kolikoly avo lenta teo amin’ny fanodikodinam-bolam-panjakana ity fa mangina tanteraka ny raharaha. Araka ny fanambarana nataon’ny teo anivon’ny birao mahaleo tena misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny bianco tamin’ny fotoana nanaovana ny fanadihadiana an-dRazaimamonjy Claudine dia mbola misy raharaha miisa sivy hafa hanenjehana an’ity mpanolo-tsain’ny filoham-pirenena ity, izay voalaza fa tafiditra ao anatin’ny trangana kolikoly avokoa.
Hatreto anefa toa tsy nandrenesam-peo intsony ireo mpanao fanadihadiana sy ny amin’izay mety ho tohin’ny fanenjehana ity voampanga eny anivon’ny fitsarana. Ankoatr’izay, mifanindra an-dalana amin’ny fangatahan’ireo mpikambana ao anatin’ny Comité pour la Reconciliation Nationale na ny Crn manoloana ny famarotana ny Villa Elisabeth etsy Ivandry amin’ny tokony hisian’ny fanadihadiana feno hataon’ny bianco amin’ireo olona ambony izay nanao sonia iny fifampivarotana fananam-panjakana iny.